.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: "ခုန်လိုက်သီချင်းနဲ့" ကိုယ်ပျောက် Flash Song လာပြီ :D
"ခုန်လိုက်သီချင်းနဲ့" ကိုယ်ပျောက် Flash Song လာပြီ :D
"♪♫Yeah this song represent by MC လွှမ်းပိုင်♪♫" ♥Yeah Bobby Soxer Yeah♥
*Rock Star Yeah NCE Yeah Yeah Yeah Rock Star* ☺MC Thurainlin! Yeah :D☺
လှုပ်ရင်းခါလို့လည်း ပြီးပြီ ဒီသီချင်းကို Fruity Loop နဲ့တီးပြီ
မင်းနားထဲမှာ ကြားနေရတဲ့ သီချင်းရဲ့ ခေါင်းစီးသည်
အရင်ကနဲ့မတူ ထူးခြား ပိုမို မြူးကြွ ခုန် ခုန် ဒီလိုလိုက်ခုန်''
ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ!!!!!!!!!!! အဲ ဟုတ်ပါဘူး :P သူငယ်ချင်းများ အားလုံး မင်္ဂလာပါလို့..
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ လွှမ်းပိုင်ရဲ့ သီချင်းထဲကလို အရင်ကမတူ တမူထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ပျောက် Flash song
လေးအကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်တယ်..လန်းတာကတော့ [ ဂွမ်းတောင်နေမလား မသိ :P]
ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ..အသံပဲနော်..ဘယ်နားက သီချင်းလာနေမှန်း မသိ ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်း)
ဟောဒီကုတ်လေးနဲ့ ထည့်ထားတာပါဂျာ..ကြိုက်တယ်ဆို ဆွဲသွားလိုက်တော့ ဟီးဟီး
<embed src=" http://api.ning.com:80/files/t32wP2SYoTscR0GpdTD8LcPLlvrXxfr20
<embed src=" ဒီနေရာမှာ သီချင်းလင့်ထည့် "width="0" height="0"></embed>
ဒါကတော့ မသိသူ ကျော်သွား သိသူဖော်စားပဲ။ လူတိုင်း သိပ်သတိမထားမိတာလေးပေါ့..
ကျွန်တော်တို့ Flash Song ထည့်တဲ့ ကုတ်တွေမှာ ဥပမာ ဟောဒီလို width="550" height="400"
အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ထည့်မယ့်သီချင်းရဲ့ အလျားအနံပါပဲ..
ကိုယ်ပေါ်စေချင်သလောက် ဂဏာန်းတွေ အတိုးအလျှော့ လုပ်လို့ ရတယ်လေ..အဲဒီကုတ်လေးကို
width="550" height="400" နေရာမှာ width="0" height="0" ထားလိုက်ရင် သီချင်းက
ပျောက်နေတာပေါ့။ Web Page တစ်ခုအနေနဲ့ နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေး ကနေ
သွားရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ကျရင်တော့ ဒီ ပို့စ်ဘောက်ထဲမှာ ထည့်မထားတော့ပါ။
ဆူပြီး နားငြီးသွားမှာစိုးလို့ပါ..အခုတော့က နမူနာအဖြစ် ခဏထည့်ပြပေးထားပါတယ်..
ဆူနေတယ်ဆိုရင်တော့ နားကြပ်ဖြုတ် စပီကာတွေ ပိတ်ပြီး သည်းခံပေးကြပါလို့..
Posted by Thurainlin at 05:32
eainlwan thu 23 January 2013 at 21:47
အစ်ကို ကျွန်တော့်ကို flash swf file တွေဒေါင်းတဲ့ဆိုက်က ဘယ်လိုဒေါင်းရလဲအစ်ကို တစ်ချက်လောက် ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တာတော့ အဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုဒေါင်းရမှန်းမသိလို့ အဲဒီမှာ menu လေးတွေလိုချင်လို့ပါ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့ တင်ပြပေးပါဦး
eainlwan thu 23 January 2013 at 21:56
လေးသုံးချင်လို့ပါ အဲဒါဘယ်မှ ရှာလို့အဆင်ပြေမလဲ အစ်ကိုသိရင်
တစ်ချက်လောက် ကျွန်တော့်ကို ညွန်ပေးပါဦး